बोल्नेलाइ हैन, गर्नेलाइ भोट | www.itaharifm.com.np
गृहपृष्ठ » बिबिध » बोल्नेलाइ हैन, गर्नेलाइ भोट
बोल्नेलाइ हैन, गर्नेलाइ भोट
Posted by Itahari Fm | error | ४४२ पटक
एम बि सुवेदी /
जे जस्तो छ , त्यसै बाट शुरु गरौं
चुनावी गीत सुनाएर भ्रम नछरौं
कुनै पनि महत्वपुर्ण नेताले वा गायक कलाकारले महत्वपुर्ण समयमा बोलेका वा गाएका शब्द र शैलि लाई महत्व कै साथ सुनिन्छ वा बुझिन्छ । नेता वा कुनै गायक कलाकारले चुनावी–विज्ञापन को नाममा हचुवाको तालमा अनेकौँ प्रश्न तेर्सिएका अभिव्यक्ति दिनु वा गीत–कविता बनउनु सरासर नैतिक अपराध हो वा जनतालाई दिउँसै रात पार्न खोज्नु हो । यो कुरा मैले कुन प्रशंगमा राख्नलाई खोजेको हो , त्यो कुरा जान्नु भन्दा पहिले म एउटा सानो कथा बाट उदाहरण दिन चाहान्छु ।
एकताका पशुहरुको देशमा पनि चुनाव हुने भएछ । गाई–गोरु, राागा–भैँसी, गदा–घोडा, भेडा–भेडी, बोका–बाख्रा, कुकुर–बिराला सबैले आ–आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवार उठाएछन् । ती उम्मेदवार मध्येमा धुर्त चलाख चंखे बिरालो रहेछ । त्यो चंखे बिरालोले एकदिन भेडाहरुको क्षेत्रमा आमसभाको आयोना गरेछ । त्यो चंखे बिरालोेले भाषण दिदै भेडाहरुको समुदायलाई भनेछ, “मेरा आदरणिय भेडा महानुभावहरु,यदि चुनावमा हजुरहरुले मलाई भारि मतले विजय गराउनु भयो भने, म सबै वृद्ध–वृद्धा भेडा हजुरबा र भेडी हजुरआमाहरु लाई प्रति वर्षका दरले एक–एक थान ओडने, कम्बल, ओछयाउने राडी र लगाउने स्वीटर वृद्ध भत्ताकोे रुपमा वितरण गर्नेछु । यो मेरो प्रतिबद्धता हो । यसमा हजुरहरु ढुक्क हुनुहोस् । मैले जे बोल्छु, त्यो म पु¥याएरै छोडनेछु ।”
त्यो चंखे बिरालो को भाषण सुनेर सबै भेडा–भेडीहरुलाई ढुंगा खोज्दा देउता मिलेकै जस्तो भएछ अनि अतिनै मख्ख परेछन् र त्यहि चंखे बिरालोलाई भोट हाल्ने निर्णय गरे पनि भेडाहरुको नाइके एउटा बुढो भेडालाई उनिहरुको निर्णय चित्त बुझेन । त्यहि बेलुका त्यो वृद्ध नाइकेले सबै भेडा–भेडीहरुलाई चौतारीमा भेला हुन उर्दी जारी गरेछ । उर्दी मुताविक बेलुका सबै भेडा–भेडीहरु गाउँको चौतारीमा भेला भएछन । अनि एउटा युवक भेडाले नाइके भेडालाई सोधेछ ः–“हामीलाई के कति कामले बोलाउनु भएको हो हजुरबा ?”त्यो युवक भेडाको प्रश्न सुनेर त्यो नाइके भेडाले प्रति प्रश्न गर्दै सोधेछ “होइन म यो के सुन्दैछु ? के तिमीहरुले त्यही चंखे बिरालोलाई भोट हाल्ने भयौ रे नी हो ?” अनि सबै भेडा–भेडीहरुले एकै स्वमा भनेछन “हो त हजुरबा ” फेरि नाइके वृद्ध भेडाले चासो मान्दै सोध्यो “किन ? के कारणले त्यो चंखे बिरालोलाई रोज्यौ त ?” नाइके वृद्ध भेडाको प्रश्न सुनेर एउटा ठिटो भेडाले भनेछ “हजुरहरु जस्ताको वृद्ध–वृद्धा भेडा हजुरबा र हजुरआमाहरुलाई एक–एक थान कम्बल, राडी र स्वीटर वृद्ध भत्ता स्वरुप वितरण गर्ने रे उनले कसम खाएर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका पनि छन् । अनि कसरी भोट नदिनु त हजुरबा ?”
त्यो ठिटो भेडाको कुरा सुनेर वृद्ध नाइके भेडाले सबैलाई सम्झाउँदै भनेछ,“हेर बाबु नानी हो ! कुनै पनि निर्णय लिनु भन्दा पहिले त्यसको अर्थ र रहस्य बुझ्नु पर्दछ । हचुवाको भरमा कुनै पनि निर्णय लिनु वा दिनु हुँदैन, यसबाट पछि ठुलो धोका पाइन्छ । म तिमीहरुलाई एक–दुई वटा प्रश्न सोध्छु, सोचेर बुझेर जवाफ देउ हुन्छ ?” अनि सबै भेडा–भेडीहरुले एकेै स्वरमा भने, हुन्छ हजुरबा । त्यसपछि वृद्ध नाइके भेडाले प्रश्न गर्यो “लौ भन त बाबु–नानी हो कम्बल, राडी, स्वीटर के बाट बनाइन्छ ?”
सबैले एकै स्वरमा जवाफ दिए “ऊनको धागोबाट हजुरबा ”
फेरी वृद्धले प्रश्न ग¥यो “ऊनको धागो के बाट तयार पारिन्छ ?”
सबैको एउटै जवाफ आयो “हाम्रै रौँ बाट त हो नी हजुरबा ”
त्यसपछि ती वृद्ध नाइके भेडाले मुसुक्क हाँस्दै भनेछ “हो अव त त्यो चंखे बिरालोको चलाखी बुझ्यौ होला नी ? त्यो चंखे बिरालो भोट तान्नको लागि हामी भेडा जातीलाई उल्लु बनाएर गयो र तिमीहरुलाई थाहा छैन ? त्यो चंखे बिरालोले हाम्रै शरिरको ऊन काटेर हामीबाट कर (शुल्क) उठाउँछ अनि त्यहि ऊनको केही हिस्सा बाट कम्बल, स्वीटर तयार पारेर वृद्धभत्ताको नाममा हामीलाई वितरण गर्छ । अब तिमीहरु आफै भन त बाबु नानी हो हामिलाई किन चाहियो कम्बल, राडी र स्वीटर ? हामलाई त आफ्नै शरिर कै ऊन न्यानो छ नी”
वृद्ध नाइके भेडाको गहिरो प्रेरणादायक कुरा सुनेर सबै भेडा–भेडीहरु लाजवाफ भए । अफ्नो उल्लुपन बाट लज्जित हुँदै आ–आफ्नो घर तिर लागे अनि त्यो चंखे बिरालोको राजनीति चलाखी बुझेर भोट नहाल्ने निर्णयमा पुगेछन् ।
“कुरो बुझ्नु र घर तिर कुद्नु” भनेझैँ लोकप्रिय गायक बद्री पंगेनी जी ले जुन शैलि–शब्द र भाका हालेर चुनावी विज्ञापनका लोक भाका गीत गाएपनि भेडा र चंखे बिरालोको कथा जस्तै हो । “हजुरबाले भन्नु हुन्छ खै…..के मा भोट हाल्ने , हजुरआमा भन्नु हुन्छ ….. फलानो पार्टी हो पाल्ने….”
हो वृद्ध–वृद्धालाई पाल्नु त हर मानवको परम धर्म हो तर पाल्ने त पाल्ने तर कुन आयस्रोतले पाल्ने ? आफ्नो (नेताको) निजी सम्पति बाट कि ? नाती–पनातीको खुन पसिनाको कर बाट उठाएको पैसाले पाल्ने ? यसको जवाफ पनि मीठो भाका को गीतबाटै दिने हो की गायक ज्यु !
वृद्धभत्तालाई चुनावी नारा बनाएर मात्र ठोस प्रमाण जुटदैन , यदि हाम्रा नेताहरुलाई वृद्ध–वृद्धा हजुरबा–हजुरअमा प्रति त्यस्तो गहिरो माया छ भने गीत मार्फत वा भाषण मार्फत यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहोस कि “हामी अफ्नै निजि सम्पति बाट वृद्धभत्ता वितरण गर्ने छौ ।” के सक्नुहुन्छ, यो भीष्म प्रतिज्ञा गर्न ? यदि सक्नुहुन्छ भने, आजैबाट वृद्धभत्ता वितरण गर्न सुरु गर्नुहोस् । यसको लागि स्वगत छ ,तपाँइहरुलाई हामी भगवान नै मान्ने छौँ, यदि सक्नुहुन्न भने अर्थहीन चुनावी विज्ञापन आजैबाट बन्द गर्नुहोस, हुने र सक्ने कुरा मात्र गर्नुहोस । यसले मात्र तपाँइको राजनीतिक विस्वसनिय र उज्वल बन्नेछ ।
नेपाली जनता त्यति कठोर र मुर्ख हुँदैनन् । हुनै नसक्ने वा देशको आर्थिक हैशियतले भ्याउनै नसक्ने काम गरेर देखाउनै पर्छ भनेर नेपाली जनताले कहिल्यै भनेका छैनन् । पानीलाई दुध बनाऊ, ढुंगार्लाइ सुन बनाऊ, आकाशको जुन–तारा झारिदेऊ भनेका छैनौँ । नाती–पनातीलाई करको भार बोकाएर हामीलाई वृद्धभत्ता देऊ भनेर कुनै हजुरबा हजुरआमाले भन्नु भएको छैन र भन्न पनि चाहानुहुन्न होला । भएको साधनस्रोतलार्इृ सहि सदुपयोग गरेर देश विकास गर, शान्ति अमनचयन कायम गर भन्ने हामी आमजनताको माग हो तर “काम कुरो एका तिर कुम्लो बोकि ठिमी तिर” भने झैँ हावाको तालमा जनतालाई दिउँसै रात पार्ने खालको ठट्यौली उट्पट्याङ चुनावी विज्ञापन घन्काएर देश उभो लाग्दैन । यो कुरा सबै दलका नेता र कार्यकर्ताले ख्याल गर्नुहोस् ।
फलानो बाद, चिलानो बाद, ढिस्को बाद, यो बादैबादको भाषण र विज्ञापनले देशै बर्बाद भइसक्यो । कुनै पनि विरुवालाई हुर्काएर फुलाउनु–फलाउनु छ भने टुप्पो मा मलजल हालेर हुँदैन, फेदमा हाले मात्र त्यसले सही फल दिनेछ । त्रिशुली नदीमा सयौँ यात्रु वर्षेनि अकाल मै झरेर मरेका छन् तर नेताहरु मेट्रो रेलको भाषण दिन्छन । नदीमा राम्रो पुल नभएर जनताले जोखिममा मोलेर तुइन र डुंगाको साहारामा नदी तर्नु परेको छ तर नेताहरु सात समुन्द्र पारिको पानी जहाजको कल्पना गर्नुहुन्छ । “लौ न त गरेर जनतालाई देखाऊनुस” “भन्यो भने” हामीलाई सक्तामा बस्नै दिदैन् ’ भन्नु हन्छ । के काम गरेर देखाउनलाई सक्तामै पुग्नु पर्छ र ? खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने झै गर्ने मन हुनेलाई सत्ता चाहिन्छ भन्ने छैन ।
यसको ज्वालन्त उदाहरण कलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुन्जना घिमिरे (सुन्तली) लाई लिन सकिन्छ । के उँहा युगल जोडीले राज्यको सक्ता पाएरै जनताको सेवा र उन्नती गरेको हो त ? नेताले जहिले पनि भ्यागुतोको असफल उफ्राइमा होइन , कमिलाको लगनशील गतिमा आफुलाई अधि बढाउन सक्नु पर्छ । भ्यागुतो जति उफ्रिए पनि एउटा सानो काल्नो नाघ्न सन्दैन तर लगनहील र धैर्यगतिमा अघि बढेको कमिला एक दिन शिखर पुग्दछ । त्यसैले विस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ , हतार गरे त्रिशुलीमा डुबिन्छ , हो की होइन जनता हो ?
बरु जे जस्तो भए पनि र जे जस्तो छ , देशकै साधन श्रोत र जन शक्ति जुटाएर काम गर्दै जादा कमीला झै एक दिन सहि लक्ष्यमा पुगिन्छ भन्ने अटल सोच राखेर अघि बढ्ने पार्टी भनेको नेपाली कागे्रस ने हो की जस्तो लाग्न थाल्यो । न हुने र नचाहिदो आशा र फुर्ति जनतालाई दिएको जस्तो लाग्दैन । १९९७ साल देखी आज सम्म जति सुकै विपत्ति र उतार चढावको सामना गर्नु परे पनि आफ्नो जाती, धर्म, गति र समाजबादको सिदान्तबाट कहिले विचलित भएको पाइएन तसर्थ ढिलो होस तर दिगो र दरिलो विकासको लागि अब नेपाली कांगे्रसको विकल्प छैन ।
नेपाली कांगे्रसले पनि अब जन–भावना बझेर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसले मेट्रो रेल होइन , सबै भन्दा पहिले त्रिशुली खण्डको बाटो वा अन्य ठाँउको विकट बाटो सहज बनाओस । अहिले पानी जहाज होइन, डुङ्गा र तुइनको जोखिम मोल्न पर्ने बाध्यतालाई हटाओस् । तत्काल हावाबाट विजुली निकाल्न सपना होइन, विपनाको लोड सेडीङ्ग हटाओस । भान्सा – भान्सामन ग्यास पाइप जाड्ने आसा होइन, तत्काल इन्धन र ग्यासको भाउ गरीब मैन्त्रि बनाओस् । नाती पनातीबाट उठाएको शुल्कले होइन, सन्तानले वृद्घ–वृद्घा अभिभावकको सु–संरक्षण गर्नुपर्ने कडा कानुन ल्याओस । गीत, नारा र भासणमा मात्र होइन , व्यवहारमा प्रमाणीत गरेर देखाओस् ।
मैले आफ्नो मनमा लागेका कुरा लेखेको छु, यसबाट कतिपय मित्रहरुलाई नमिठो पनि लाग्यो होला तर विःनम्रका साथ भन्छु मित्र हो, यो भनाइले काही आत्तिनु पर्दैन किन की अर्ति र औषधी कहिले मिठो हुँदैन तर परिणम राम्रो दिनेछ । विभिषण, हनुमान र अंगदको अर्ति रावणलाई मीठो लागेन, आखिरमा परिमाण के भयो ? वंश सहित रावणको विनास । भिष्म, विदुर र भगवान कृष्णको अर्ति दुर्योधनलाई त झन मन परेन, आखिर परिणाम त्यही भयो , कुरु वंशको विनास । त्यसैले बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
प्रदेश १ मा आजथप एक जनामा कोभिड—१९ पुष्टि
प्रेस युनियन सुनसरीले १ सय ५० पत्रकारको एक लाखको कोरोना वीमा गर्ने
एफवान सफ्टद्धारा ‘क्वीकभुक्तानी’ प्लाटफर्मकाप्रथमप्रयोगकर्ताहरु सम्मानित
फेसबुकमा विज्ञापन गरे मुद्दा लाग्ने